Ikhodi eyiqiniso yamaPutukezi ene-paprika namazambane | Ukupheka Kwekhishi
Ngingene Portugal, futhi ngaphezu kwakho konke, ukudla kwabo. Lapho unganambitha ikhodi emnandi kunazo zonke emhlabeni. Noma iyiphi iresiphi yekhodi ilungiswa njenganoma ngubani omunye umuntu. Ngakho-ke namhlanje bengifuna ukukulethela leli puleti le- I-cod ne-paprika, kumnandi ekudleni kwethu kwe UKhisimusi, lokho kungaba yingxenye yemenyu ecebile kaKhisimusi kakhulu kwezomnotho.
Ngalesi iresiphi esizoyisebenzisa i-cod ekhishwe ngamatshe. Ungazikhipha ku-desaline ngokwakho noma uthenge izinkalo esevele zisendaweni efanele kasawoti (ngithanda uqobo lwawo avela eMercadona). Uma ukhetha ukuwakhipha emanzini, kuzodingeka ube nawo okungenani amahora angama-48, ushintsha amanzi. Izikhathi ze-3 nokuyigcina efrijini.
Qaphela, iresiphi ngeke sisebenzise usawoti ngoba i-cod isivele inosawoti ngokwanele.
Sizobhangqa i-cod yethu namazambane athosiwe esizoqeda ukuwenza kuhhavini. Uyafuna ukwazi ukuthi le recipe ilandela kanjani?
4 cod nezibopho
4 amazambane amancane
Ufulawa (ukufulawa kwekhodi)
200 gr kawoyela wokuthosa
1 isipuni esikhulu se-paprika
50 ml wewayini elimhlophe
50 ml wamanzi
I-piquillo pepper ibe yimichilo
Kubaluleke kakhulu ukuthi ama-cod fillets omile kahle. Ngenxa yalokhu singazivumela zikhiphe amahora amaningi bese sizomisa ngephepha lasekhishini.
Sisika amazambane njenge-omelette futhi siyabeka.
Sifaka u-200 gr cishe kawoyela epanini lokuthosa nokushisa kuya ukushisa okuphakathi nendawo.
Siyawathosa amazambane aze abe ngagolide futhi aqhakaze bese uwafaka esitsheni esifanelekile se-ovenproof, ufafaze ingcosana kasawoti (omncane kakhulu) bese uyabeka.
Sidlulisa izinkalo kufulawa nefry. Sifuna ukuthi zosiwe ngaphandle kodwa zingenziwa ngaphakathi (zizoqeda ukupheka eziko). Sizoba nazo cishe Imizuzu ye-4 ohlangothini ngalunye. Sizibeka phezu kwamazambane ebesiwabekile.
Sihlunga uwoyela embizeni bese sengeza i-100 gr / ml (cishe uhhafu wengilazi) epanini. Siyafudumeza sicime umlilo. Siphonsa i- upelepele uvuse kahle. Faka amanzi newayini epanini (konke umlilo usuvele ucishiwe) ugovuze kahle. Faka amazambane ne-cod ngaphezulu. Beka amapheshana we-piquillo pepper phezulu naphakathi kwamazambane ukunambitha.
Sishisa ihhavini ukuze I-170º (ukushisa phezulu nangaphansi) bese ubhaka i-cod Imizuzu ye-15.
Ukupheka kukaKhisimusi, Ukupheka Kwenhlanzi
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izikhathi ezikhethekile » Ukupheka kukaKhisimusi » Cod Portuguese
San jacobos, isidlo sakusihlwa esisheshayo